Cá Trích - Những Tác Dụng Của Cá Trích Với Sức Khỏe | Hatgiongtihon.net - trung tâm cung cấp hạt giống tí hơn
Cá Trích – Những Tác Dụng Của Cá Trích Với Sức Khỏe | Hatgiongtihon.net
Đang Đọc: Cá Trích – Những Tác Dụng Của Cá Trích Với Sức Khỏe | Hatgiongtihon.net in Hatgiongtihon.net
IHerring yintlanzi efana neapilkosi kodwa inkulu, inolusu oluluhlaza, amathambo amancinane, umzimba omde, obhityileyo, imihlathi emibini elinganayo. Intlanzi enamazinyo amancinane okanye angekhoyo, izikali ezingqukuva ezibhityileyo, kulula ukuwa, ezinye iintlobo zineekala zokukama, umqolo wentlanzi unamazinyo arhabaxa. … Ingakumbi herring ngumthombo otyebileyo wokutya kwamaxhalanga anempandla. Sijoyine ukuze ufunde ngakumbi malunga ukufukama Funda eli nqaku lingezantsi ukuze ukwazi ngakumbi malunga nokuba zeziphi iingenelo zempilo ye-herring!
1 Imvelaphi ye-herring
2 Iimpawu zeherring
3 Ukuhlelwa kweentlobo ze-herring
3.1 Round herring
3.2 I-Bone herring
4 Indawo yokuhlala kunye nokuziphatha kwama-stingrays
5 Zizala njani iiherring?
6 Ukutya kweHerring
7 Iziphumo zeherring
7.1 Ukunciphisa umngcipheko wezifo zentliziyo
7.2 Ngokuchasene nokuguga
7.3 Phucula impilo yomntwana wakho
8 Yintoni eyenza iherring ibe mnandi?
8.1 I-herring yeqanda ecudiweyo (isushi yaseJapan)
8.2 Braised herring
8.3 Phu Quoc herring isaladi
9 Yimalini iherring 1kg?
10 Inqanaba lomngcipheko kwi-herring
I-Herring yintlanzi ekhethekileyo yokuhlala kwiindawo zaselwandle, ziyafuduka kwaye zincinci ngobukhulu.
Ngezantsi, siya kukunceda ufunde ngemvelaphi kunye neempawu zeentlanzi ezityebileyo kwixabiso lesondlo esithandwa ngabantu abaninzi.
IHerring inegama lesiNgesi lesayensi elithi Sardinella, iherring luhlobo losapho lweherring iClupeidae kunye nemigca yesardadi, i-hilsa, i-menhadens kunye nentlanzi ye-shad.
I-herring yokuqala yafunyanwa ngo-1847 yafunyanwa ikakhulu kwimimandla ye-Atlantiki, i-India kunye ne-Pacific.
Namhlanje, imigca ye-herring ifuywa ngokubanzi kulo lonke ihlabathi. Ziba ngumthombo wokutya obonelela ngezondlo ezininzi, ezixhasa uphuhliso lwabantu.
I-Herring yintlanzi encinci ehlala elwandle, i-herring endala inobunzima be-100g kuphela, kunye nobude malunga ne-10-15cm intlanzi enye.
Umzimba we-herring umile njengeqokobhe, ulusu kunye nezikali zi bluish, umzimba ude, kwaye i-skeleton yabo incinci.
Amaxolo eentlanzi mancinci kakhulu, abhityile kwaye angqukuva, ekulula ukuwa. Kwinxalenye ye-ventral yentlanzi kukho amazinyo abukhali kakhulu kwaye abukhali.
Ngasemva kukho iphiko eliphezulu elimile, umsila mfutshane kwaye wohlulwe embindini. Intloko ye-Herring incinci kakhulu, umhlathi ongezantsi uyaphuma, amehlo entlanzi makhulu kakhulu xa kuthelekiswa nobukhulu bentloko kunye ne-convex kancinane.
I-Herring luhlobo lwentlanzi ephefumla nge-gill system entloko.
Ukuhlelwa kweentlobo ze-herring
Kukho malunga nama-20 eentlobo ezahlukeneyo kwintsapho ye-herring ehlala kwihlabathi. Nangona kunjalo, ezona ntlobo zixhaphakileyo yi-herring engqukuva kunye ne-bony herring.
I-Round herring ikwabizwa ngokuba yi-erroneous herring. Lo mgca we-herring unomzimba ongqukuva, izikali ezimbalwa, inyama eninzi kunye nethambo elincinci.
Nangona ininzi inyama, lo mgca we-herring awuthandeki, kuba inyama ye-herring engqukuva inombala obomvu kwaye ayinavumba elimnandi njengethambo le-herring.
I-Bone herring eVietnam ikwabizwa ngokuba yi-herring tick. Lo mgca we-herring unomzimba omhle, unezikali ezininzi zesilivere-eziluhlaza, inyama yazo iqinile kakhulu – imhlophe.
Xa ujabulela, inyama ye-herring yamathambo iya kuba mnandi kakhulu kwaye inamafutha kunomgca we-herring ojikelezayo.
Indawo yokuhlala kunye nokuziphatha kwama-stingrays
I-Herring yintlanzi ekhethekileyo yokuphila emanzini anetyuwa (amanzi olwandle). I-Herring igxile kwiindawo ezingaphezulu kwamanzi kwaye ziyafuduka ngamaxesha athile onyaka.
I-Herring ikwangumgca nomkhwa wokuhlala ngamaqela. Ngokwezibalo, i-herring yeyona ntlanzi inkulu ehlabathini.
Isikolo se-herring sinokufikelela kumakhulu amawaka eentlanzi, indawo egqunywe sisikolo se-herring ingaba ngamawaka eekhilomitha zeekhilomitha.
Zizala njani iiherring?
I-Herring ngumgca wentlanzi kunye nokuziphatha kokuzala ngendlela yokubeka amaqanda. Xa kufika ixesha lokuzala, ziya kufuduka zisuka elwandle zibuyele emanzini emilambo ukuze zizale.
Imazi ye herring ibeka amaqanda anokufikelela kumaqanda angaphezu kwe-100,000, adla ngokubeka kwindawo ekufutshane namanzi.
Emva kokuba amaqanda eqanduselwe, imibungu yeentlanzi ezelweyo iya kuqhubeka ikhula ukuze ibe yifry epheleleyo.
I-Herring emva kokubeka amaqanda ayiyi kukhusela amaqanda okanye intshontsho xa iqanduselwa. Ke ngoko, amanani abantu abancinci abasindayo de babe badala anqabile kakhulu.
I-Herring yintlanzi encinci kunye ne-omnivorous.
Okunye ukutya okuqhelekileyo kwe-herring line: i-shrimp encinci, iplankton, intlanzi encinci, i-squid kunye ne-octopus yomntwana….
Ngokombono wabantu abaninzi, i-herring yenye yokutya okutyebileyo kakhulu kwizondlo.
Ukuze ufunde ngakumbi malunga noku, makhe sihlolisise kunye nathi.
Ukunciphisa umngcipheko wezifo zentliziyo
Ngokutsho kolunye uhlolisiso, abantu abadla ngokutya iherring baya kwandisa umlinganiselo wecholesterol entle baze banciphise inani lecholesterol embi emzimbeni.
Ukunciphisa i-cholesterol embi kuya kunciphisa umngcipheko ohambelana ne-atherosclerosis kunye neengxaki ezichaphazela intliziyo.
Ukongeza, ioli ye-herring ikwanceda ukunciphisa iiseli ezinamafutha emzimbeni. Gwema isifo segazi elinamafutha, intliziyo – isibindi esinamafutha kunye nobungozi besifo seswekile.
Kwabasetyhini, ukusetyenziswa rhoqo kwe-herring kulungile kakhulu.
I-Herring iqulethe i-unsaturated fatty acids, ezilungileyo ekuphuculeni ulusu, ukwandisa ukuguquguquka, ukwandisa ukuqina kunye nokunciphisa imibimbi eluswini.
Ngexesha elifanayo, likwanciphisa izifo ezivuthayo esikhumbeni, ukunika abafazi ukukhanya okuqaqambileyo, okuqaqambileyo, okuqinileyo kunye nolusu olunempilo.
Phucula impilo yomntwana wakho
Inyama yeHerring inesixa esityebileyo kakhulu seoyile ye-omega 3 kunye ne-DHA, elunge ngakumbi kuphuhliso losana olungekazalwa.
Abasetyhini abakhulelweyo abasebenzisa ioli ye-herring rhoqo baya kuba nokulala okungcono kumama kunye nosana kunabasetyhini abakhulelweyo abangasebenzisi i-herring.
Ukulala kubaluleke kakhulu, ukulala kakuhle, ukuphuhliswa kwenkqubo ye-nervous yabantwana abancinci ikhula kwaye igqibe ngendlela engcono kakhulu.
Iqulethe izinto ezinciphisa umngcipheko womhlaza wesibindi
Ngokutsho kwezifundo ezimbalwa zezazinzulu zaseJapan, inyama ye-herring iqulethe i-omega 3 acids (eyaziwa ngokuba yi-fatty acids ephezulu).
Olu hlobo lwe-asidi ye-unsaturated fatty lulunge kakhulu kwimpilo yabantu, ngakumbi izigulane ezinyangwa izifo ezinxulumene nesibindi.
Kolu phononongo, kwinyama yeherring ineselenium, ikhompawundi enceda ekunciphiseni amathuba okuba nomhlaza, ngakumbi umhlaza wesibindi.
Ukongeza kwimiphumo emihle emzimbeni, xa isetyenziswe ngokungalunganga kunye nedosi efanelekileyo, kunokukhokelela kwiimpawu ezinobungozi kakhulu.
Xa usebenzisa le ntlanzi, kufuneka ususe amaqanda, isibindi kunye nezitho zangasese zentlanzi. Ezi ndawo zineetyhefu ezininzi, ngakumbi ngexesha lokuzala kweentlanzi.
Yintoni eyenza iherring ibe mnandi?
Inyama yeHerring inezondlo ezininzi ezilungele umzimba womntu. Ngenxa yoko, zisetyenziswa kakhulu ekuqhubeni izitya ezimnandi kunye nokutya okusebenzayo.
Ngezantsi siza kukwazisa izitya ezimbalwa ezimnandi nezinomtsalane ezenziwe kwi-herring.
I-herring yeqanda ecudiweyo (isushi yaseJapan)
I-Herring enamaqanda sesinye sezidlo ze-quintessential ezivela kumhlaba wokuphuma kwelanga-eJapan. Esi sidlo asinayo inkangeleko eyodwa kuphela kwaye sinomdla kakhulu ukusilungiselela.
Ukuba ungumntu othanda ukutya kwaseJapan, ngokuqinisekileyo akufuneki uphose esi sidlo sinomtsalane kakhulu.
I-egg-pressed herring dish yenziwe kwizinto ezi-2 eziphambili: inyama ye-herring fillet kunye ne-flying fish roe.
Inyama yeHerring xa isikiwe iya kugalelwa ngeviniga yeziqhamo, emva koko icinezelwe ngomqolo wentlanzi ephaphazelayo phezulu.
I-herring ene-egg-pressed idla ngokuba neentlobo ezi-3: i-herring etyheli (incasa yendalo), i-herring ebomvu (ifakwe kwijinja enetyuwa), i-herring eluhlaza (incasa yemostade – incasa yesashimi).
Xa usonwabela isitya se-herring esicinezelwe ngamaqanda, unokuva ubumnandi obutyebileyo benyama ye-herring engavuthwanga efakwe kwiviniga kunye nencasa erhabaxa kunye ne-crunchy ye-flying fish roe enyibilika emlonyeni wakho.
Esi sidlo asikho nje mnandi kodwa sikwabonelela ngezondlo ezininzi ezinje: DHA, omega 3 …
I-braised herring inokuthiwa sisidlo esiqhelekileyo kubantu baseVietnam. Esi sidlo asinikezeli nje kuphela izondlo ezininzi kodwa kwakhona sisidlo esilula kakhulu kwaye esimnandi.
Kukho iindlela ezininzi zokugcina i-herring, kuxhomekeke kwincasa kunye nommandla, kuya kubakho iindlela ezahlukeneyo zokugcina iintlanzi. Ngezantsi siza kukubonisa indlela yokugcoba i-herring nge-galangal emnandi.
Ukwenza isicatshulwa esimnandi se-galangal braised, kufuneka ulungiselele i-herring ecocekileyo, i-galangal etyumkileyo, isosi yentlanzi emnandi, ioyile yokupheka, imbewu yesinongo, isitokhwe, ipepile, itshili….
Ukuze intlanzi ifunxe iziqholo kwaye incame ngcono, kufuneka uhambise intlanzi ngeziqholo malunga neyure enye kwaye uyizise kwindawo yokugcina impahla.
Ukuba ufuna imbiza efanelekileyo ye-braised herring, kufuneka uqhole intlanzi ide ingabi namathambo (ngokuqhelekileyo ithatha iiyure ezi-5-6).
Xa ujabulela i-braised herring, kufuneka ujabulele ngerayisi eshushu emhlophe, iya kuba mnandi ngakumbi.
Ukongeza, unokucubungula intlanzi ye-stingray, itumata, isitokhwe sepepile, ibhekoni, imolasses,
Phu Quoc herring isaladi
Isaladi yeHerring kunokuthiwa yinto ekhethekileyo yamanzi ePhu Quoc. Naluphi na undwendwe xa lusiza ePhu Quoc, ngaphandle kokubona indawo kunye nokuqubha, lufuna kanye ukonwabela incasa ekhethekileyo yesaladi ye-herring.
I-Herring dish yindibaniselwano ehambelanayo phakathi kwencasa emnandi kunye nevumba elimnandi le-herring kunye nencasa ethambileyo yenyama yeencasa ezihamba nazo.
Ukuze ube nesaladi emnandi ye-herring, kufuneka ube ne-herring fillet, i-garlic egayiweyo, ioli yokupheka, iviniga, imifuno, isosi yentlanzi, i-ginger, i-chili, iphepha lerayisi, i-vermicelli, ioli yokupheka, ijusi yelamuni, iziqhamo zeenkwenkwezi, ibhanana eluhlaza. .
Ukunciphisa incasa yentlanzi ye-herring, i-herring kufuneka ifakwe iviniga encinci, i-ginger, i-chili, i-sauce yentlanzi kunye nejusi ye-lemon malunga nemizuzu emi-5-10 kwaye emva koko ikhutshwe.
Imifuno ecocekileyo kunye neziqholo baziswa. Xa usitya isaladi ye-herring, kufuneka uyiqengqe kunye ne-vermicelli, iphepha lerayisi kwaye udibanise ngesosi yentlanzi emnandi kunye nemuncu kunye nentwana yamandongomane agcadiweyo, iya kuba mnandi kakhulu.
Ukongeza kwizitya ezi-3 ezithandwayo ezenziwe ngeherring ezikhankanywe ngasentla, kukho ezinye izitya ezininzi ezimnandi kakhulu kwaye zibonelela ngezondlo ezininzi ezilungileyo emzimbeni.
Ezinye izitya zenziwe nge-herring yolwandle: i-herring eqhotsiweyo, intlanzi eshushu, inyama yentlanzi ene-tomato sauce, isuphu emuncu, igridiwe, eqhotsiweyo…
Ukuqinisekisa ukuba isitya siyahlafuna, simnandi kwaye simnandi, kufuneka ukhethe i-herring entsha. Iisardadi ezinkonkxiweyo azikhuthazwa
Yimalini iherring 1kg?
IHerring ethengiswa kwimarike yokutya yelizwe lethu inexabiso eliphakathi kuninzi lwabantu.
Ngokuqhelekileyo, ikhilogram ye-herring, intloko isuswe kwaye ihlanjululwe, ixabisa malunga ne-290,000 VND / kg (le ntlanzi ifanelekile ukucutshungulwa izitya ezithosiweyo, eziqhotsiweyo, eziqholiweyo, ezixutywe …).
Ixabiso le-herring fillet liphezulu, ukusuka kwi-350,000 VND / kg (olu hlobo lwe-herring lusetyenziselwa ukulungiselela isaladi yeentlanzi).
Ixabiso lentlanzi eyomileyo ye-stingray yile: 120,000 VND.kg
Inqanaba lomngcipheko kwi-herring
IHerring yintlanzi encinci kwaye isetyenziswa kakhulu ekwenzeni ukutya. Ngenxa yoko, inani labantu beentlobo ze-herring minyaka le liyancipha kakhulu.
Ukuze ugweme ukubangela ukuhla okukhulu kwenani labantu beentlobo ze-herring, kuyimfuneko ukuthatha amanyathelo afanelekileyo ekubambeni i-herring.
Kunye naloo nto kukuphucula indawo abahlala kuyo ukuze baphuhlise kwaye bavelise ngcono.
Ukongeza kwisizathu sokuloba kwabantu, iintlobo ezinkulu zeentlanzi zikwasongela ukuhla kwe-herring line.
IHerring kokona kutya kuthandwayo kookrebe, isalmon, iminenga, icod, iingonyama zolwandle kunye neentaka ezihlala elwandle.
Ngaphezulu ulwazi malunga herring do baokhuyennong.com iqokelelwe kwaye kwabelwana ngayo nawe. Ngethemba ngokwabelana okungentla kuya kukunceda ube nolwazi oluninzi malunga ne-herring!
Cá Vàng – Những Vấn đề Cần Lưu ý để Chăm Sóc Tốt Cho Cá Vàng Trong Quá Trình Nuôi | Hatgiongtihon.net
Cá Da Báo Mỏ Vịt – Thông Tin Chung Về Cá Da Báo Mỏ Vịt | Hatgiongtihon.net